Tratry ny lozam-pifamoivoizana ny fiara mahaleo tena Google | Vaovao momba ny gadget
Ny fiara mahaleo tena an'i Google dia lozam-pifamoivoizana lehibe, saingy tsy diso izany
Google dia manana ao Montain View (Kalifornia), miaraka amin'ny Lexys 450h, SUV mizaka tena iray izay anaovany fanandramana mitondra fiara hatrany mba hahatonga lafatra ny rafitra. Hatreto aloha dia efa niresaka lava momba ny lozam-pifamoivoizana naterak'izany isika, saingy ny lalina lalina rehetra rehetra, na izany aza, androany dia tsy maintsy miresaka momba ny lozam-pifamoivoizana lehibe nahazo ny fiara mizaka tenan'i Google izahay, saingy tazomy ny tsikera, ny mpamily ilay fiara hafa voarohirohy no nahatonga ny loza. Mety ho fiovana lehibe ho an'ny fahitantsika ny fitondrana fiara mitokana ity, izay mety ho lakilen'ny fandinihana sy ny fihenan'ny lozam-pifamoivoizana.
Ny zoma lasa teo no voadonan'ny fiara vaventy avy any Interstate Batteries, orinasan-bateria ny fiara Google. Soa ihany fa tsy nisy ny naratra manokana tamin'ireo antoko voarohirohy, na izany aza, ny fiaran'ny fahaleovan-tenan'i Google dia niharan'ny fahasimbana lehibe teo amin'ny sisiny sy ny sensor. Mandritra izany fotoana izany, ny Mercedes Vito ampiasain'ny mpamily nahatonga ny loza dia simba be eo aloha.
Ny nahatonga ny lozam-pifamoivoizana dia ny jiron'ny fifamoivoizana, tsy hoe satria tsy maty izy na noho ny tsy fahitan'ny mpanamory ny fiara mizaka tenan'i Google azy, fa noho ny tsy fiheveran'ny mpamilin'ny fiara ilay jiro.
Araka ny tatitry ny Google dia efa maitso nandritra ny enina segondra ny jiro fifamoivoizana, na izany aza, ny fiaran'ny Google dia manara-maso tsy tapaka ny olona ao anaty kodiarana, ka ilay injeniera tompon'andraikitra, nanatri-maso ny tsy firaharahiany ny mpamily, naka ny He control Google's autonomous fiara ary nanery ny frein, na dia tsy afaka nanao na inona na inona aza izy dia tsy azo ihodivirana ny vokany.
Google dia tsy namoaka ny firaketana ny lozam-pifamoivoizana, na izany aza, haingana ny fampitana fa ny 94% amin'ireo lozam-pifamoivoizana an-toerana dia vokatry ny hadisoana ataon'ny olombelona, ​​noho izany ny fandehanana manokana dia hahatonga ny familiana any an-tanàna ho mahomby sy azo antoka kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny fiara mahaleo tena an'i Google dia lozam-pifamoivoizana lehibe, saingy tsy diso izany
Orinasa "scam" Facebook miaraka amin'ny angon-drakitra mpihaino doka